Global Aawaj | कसरी मनाऔं खुसी, कसरी बाँडौं शुभकामना ! कसरी मनाऔं खुसी, कसरी बाँडौं शुभकामना !
कसरी मनाऔं खुसी, कसरी बाँडौं शुभकामना !
‘कोरोना संक्रमित बेड नपाएर तड्पिएका छन, ब्यापारी घर बहाल र बैंकको ब्याजले त्रसित छन् । यातायात व्यवसायी झन् छटपटिएका छन्, रोगी बिरामीले उपचार पाएका छैनन्, दशैंको बेला घरसम्म पुग्ने अवस्था छैन । गरिब भोकै मर्ने स्थिति छ । यो महामारीको बेला हामीले चुनेका महानुभावहरु दसैं पेश्की मोहमा डुबेको कुरा सुन्दा मन भक्कानिएर आउँछ ।’ –समुन्द्र जि.सी, (अध्यक्ष होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायी संघ रुपन्देही)
केही दिनअघि फेसबुकमा राखिएको यो पोष्ट पढ्दा लाग्यो-साँच्चै नै यो दशैं धेरैका लागि खुसी र उमङ्ग भन्दा पनि न्यास्रोमा परिणत हुनेछ । दसैं हाम्रो सांस्कृतिक पर्व हो । यूगौंदेखि मनाइँदै आएको यो सांस्कृतिक पर्व कोरोना कहरका कारण नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक हर्षमा भन्दा पनि बिस्मातका साथ बित्ने अवस्था आएको छ । हामी सबैलाई थाहा छ कोभिड-१९ को कारण नेपालको अर्थतन्त्र उकालोभन्दा पनि ओरालो लागेको अवस्थामा छ । सरकार खर्च चलाउने अवस्थामा छैन । लकडाउन गर्नैपर्ने अवस्थामा पनि कर उठाएर खर्च चलाउन सरकार आँफै बाध्य छ । नीजि क्षेत्रले करिव सात महिनाको अवधीमा अरबौंको क्षति व्योहोरेको छ । सबै क्षेत्रका आ-आफ्नै पीडा छन् । यातायात व्यवसायीले सात महिनादेखि ग्यारेजमा राखेका बस यो दशैंमा चलाउने आशा साथ सडकमा निकालेका छन् । तर, बिडम्वना यात्रु नपाएर खाली बस गुडाउनुपर्ने अवस्था छ ।
बैंक ऋण र ब्याज तिर्न नसकिएको गुनासो माझ व्यवसायीले त्यो दिनको आशा गरेका थिए, जुन दिन फेरी मुलुकको जनजीवन सहज बन्नेछ । तर, कोरोनाको महामारी बढ्दैछ । जनजीवन झनै सकसपूर्ण बन्दैछ । सरकार भन्दैछ ‘यो दशैं घरभित्रै मनाउँ । कोही आफन्त र इष्टमित्रसँगै बसेर खुसी साटासाट नगरौं ।’ बास्तवमा कोरोना कहरको करिब आठ महिना लामो सकसबीच दशैं नेपाली घर आँगनमा आएको छ । तर, यो दशैंले न रौनक ल्याउन सक्यो न बहार नै । कुनै खुसी र उमङ्ग सिर्जना गर्न सकेन । बिजयको खुसीयालीमा मनाइने दशैंले कोरोनाको त्रास र मनोविज्ञानलाई पराजित गर्न सकेन । सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै शुभकामना र आशिर्वाद छर्ने हाम्रो परम्परागत सांस्कृतिक पर्व दशैंले यो वर्ष उमङ्ग, रोमाञ्चकता र सौन्दर्यभन्दा पनि उकुस–मुकुस, उही त्रास र भूगोलको घेराबन्दी तोड्न सकेन ।
आठ महिना भयो-नेपालीको जीवन उमंगित हुन नपाएको । धन हुनेहरु पनि खर्च गर्न नपाउँदा उमङ्गित र प्रफुल्लित हुन पाएका छैनन् । त्यसैपनि यो वर्ष दशैं उजाड बन्ने नै भयो । त्यसमाथि आर्थिक सूचकहरुले पनि निरास हुने सर्वेक्षण गरिरहेका छन् । आर्थिक बृद्धि अति न्यून हुने प्रक्षेपण भैरहेको छ । जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र फेरी माथि उकासिन वर्षौ लाग्ने अवस्था छ । गत वर्ष आर्थिक बृद्धि १ दशमलव आठ प्रतिशतमा सीमित भएको सर्वविदित छ । यो वर्ष पनि आर्थिक बृद्धि त्यसभन्दा तल अर्थात ०.६ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको घोषणाले नेपालीहरुलाई निरास वनाएको छ । नेपाल सरकारको प्रक्षेपणभन्दा अत्यन्तै कम आँकलन गर्दै विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ०.६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत हुने उल्लेख छ । विश्व बैंकका अनुसार कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन क्षेत्र लगाएत अनौपचारिक क्षेत्रमा व्यापक नकारात्मक प्रभाव परेकाले नेपाल मात्र नभई दक्षिण एसियामा नै हालसम्म नै सामना नभएको चरम आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । कोभिडका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौँ कामदार बेरोजगार हुने र यसबाट दक्षिण एसियाली नागरिकले चरम गरिबीको सामना गर्नुपर्ने खतरा पनि विश्व बैंकले औँल्याएको छ । विप्रेषण आय पनि गुम्ने खतरा उच्च छ । सन् २०२१ मा दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति आय पनि अपेक्षा गरेभन्दा ६ प्रतिशतले कम हुनेछ । कोभिडको असर अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमै पर्नसक्ने देखिएको विश्व बैंकको विश्लेषण छ । त्यसमाथि नेपाल जस्तो कम विकसित राष्ट्रलाई कोरोना कहरले कैयौं वर्षसम्म गाँज्ने स्वाभाविक छ ।
आठ महिनाको अवधीमा नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रबाट ७० हजार श्रमिकले काम गुमाएको उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षामा नसमेटिएका व्यक्तिमाथि आर्थिक मन्दीको असर झनै उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्ता नागरिकको आर्थिक अवस्था खस्कन नदिन रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेकोमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले जोड दिएका छन् । अझ सहरी क्षेत्रको अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार तथा स्वरोजगार परिवार उच्च जोखिममा परेका औँल्याइएको छ । सीमित बचतका आधारमा चलेका यस्ता अनौपचारिक क्षेत्रले संक्रमणको जोखिमका बीच पनि व्यवसाय चलाउन बाध्य हुनुपर्ने र यसबाट पुनः संक्रमण फैलाउने खतरापूर्ण अवस्था औँल्याइएको छ । यस्तो अवस्थामा दसैंको उल्लास र उमङ्ग कसरी साटासाट गर्ने ? प्रश्न यहिँनिर छ ।
प्रत्येक दिन कोरोनाले ‘रेकर्ड’ बिट गरिरहेको छ र हामी त्यही रेकर्ड सुनेर त्रासमा बाँच्न विवश छौं । यो बेला दशैंको रौनकले खुसी र उमङ्ग भन्दापनि अब आउने सुदूर भविष्यको चिन्ताले नेपालीजनलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ । भविष्यको चिन्तालाई लिएर उत्पन्न कुण्ठा, नैराश्यता र उद्धिपन चिर्ने साहस गुम्दै गएको छ ।
विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीहरु मध्ये करिब दुई लाख नेपाली कोरोना कहरका बीच स्वदेश फर्किएका छन् । पाँचलाख नेपाली स्वदेश फर्किएको भनिएपनि दुई लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरुले स्वदेशमै श्रम गरेर नेपालकै माटो हराभरा गर्ने अठोट गरेका छन् । सरकारले विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई लक्षित गर्दै रोजगारी र व्यवसायमा प्रेरित गर्ने योजना अघि बढाएको छ । तर, सरकारको यो प्रतिबद्धता केवल दिवास्वप्ना जस्तै भयो । स्वदेश फर्किएकाहरुमध्ये धेरै फेरि खाडी जाने निधो गरेर उडिरहेका छन् ।
सरकारको योजना र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउन महिनौं लाग्ने देखिन्छ । त्यसले नेपालीको ध्यान तान्न सकेन । अर्कोतर्फ कोरोना महामारीले दोस्रो विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक संकट बढ्दै गएको दाबी गरिएको छ । त्यसको छनक विश्व आर्थिक मन्दीले पनि दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुले भविष्यसम्मको यसको अवश्यम्भावी प्रभावले त यसलाई सन् १९३० को भन्दा पनि भयानक ‘ग्रेटर डिप्रेसन’ को नाम दिएका छन् । मानव जीवन सुरक्षासंँगै आर्थिक सुरक्षा आजको प्रमुख मुद्दा र चूनौती बनेको छ ।
अहिले सबै आय-व्यय विपरीत दिशामा घुमेको अवस्था हो । यद्यपि कोभिड-१९ को कारण आएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्न उपयुक्त अवसर प्रदान गरेको भन्ने गरिन्छ । नेपालका लागि भने यो आकासको फल आँखातरी मर भनेजस्तै हो । सरकारले आठ महिनाको अवधीमा आर्थिक बृद्धिका ठोस कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन । सबैतिर निरासा मात्र छ । प्रत्येक दिन कोरोनाले ‘रेकर्ड’ बिट गरिरहेको छ र हामी त्यही रेकर्ड सुनेर त्रासमा बाँच्न विवश छौं । यो बेला दशैंको रौनकले खुसी र उमङ्ग भन्दापनि अब आउने सुदूर भविष्यको चिन्ताले नेपालीजनलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ । भविष्यको चिन्तालाई लिएर उत्पन्न कुण्ठा, नैराश्यता र उद्धिपन चिर्ने साहस गुम्दै गएको छ । यस्तो बेला हरेक नेपालीको मनमा एउटै प्रश्न आउने गर्दछ, यो दशैंमा कसरी मनाउने खुसी अनि कसरी बाँडौं शुभकामना !